Izigqoko zomshado zesiGreki: isithombe. Izinyawo zigqoka umshado ngesitayela sesiGreki
U-Charisma nozwela: khetha ingubo yomshado ngesitayela sesiGreki
Ukuthola ingubo yomshado ephelele kungumsebenzi obalulekile, okukuvumela ukuthi ukhethe isitayela esiyingqayizivele somcimbi obaluleke kakhulu empilweni yentombazane. Muva nje, izingubo ezigelezayo ezinhle, ezifana nezendwangukazikazikazi bamaGreki zasendulo, zithandwa kakhulu. Lesi sitayela somhlobiso womshado ubizwa ngokuthi isitayela seMbuso. Isici esiyinhloko samagqoko omshado waseGrisi ukuthi umgqeni wesikhumba ungaphansi kwesifuba somlobokazi, lapho isiketi esiwela khona siqala khona. Kungenzeka ukuthi ifakwe noma iqonde-kunoma yikuphi, isembatho sesiGrisi senza isithombe sodadekazi ohlanzekile, onamaqabunga futhi ongenalutho ongeyena efulethini elimhlophe.
Ingubo yomshado ngesitayela sesiGreki
Izambatho ezihlanjululwe kwisitayela seMbuso ziye zathola ukuthandwa ezindaweni zasemakhaya zakamuva. Ukugqoka komshado ngesitayela sesiGrisi kubonakala kulula futhi kunhle, kodwa ngesikhathi esifanayo, isithombe sinesifazane nesineke. Izindwangu zamahhala zihamba phansi, zamukela imilenze emihle yomakoti futhi ifihla - akekho owaziyo ukuthi yini efihla ingubo engaqondakali.
Njengomthetho, izingubo zokugqoka zesiGreki zihambisana nemikhono emifushane-amacembe wezinto ezibonakalayo noma izibani zamasondo. Kodwa-ke, ezinye izinhlobo zitholakala ngokuvumelana kahle nemikhono yesithombe esithi "bat", esingaqedwa kokubili ubude ¾ nobude esibukweni.
Ukuze kugcizelele isithunzi somuntu omncane womlobokazi, futhi ukuletha inothi lokuhlobisa kumhlobiso, umugqa ngaphansi kwezingubo, lapho izinto ezidlula khona zingena esikhwameni esigelezayo, zihlotshiswe ngezingubo zomzimba, i-ribbon i-ribbon noma ihlotshiswe nge-brooch enhle. Futhi maduzane uye wathandwa ukuhlobisa ingubo yamaGrisi ngemicibisholo ebonakalayo ukuze unikeze isithombe singenacala kanye nesisa. Indwangu enjalo ingaba ne-harness noma ngaphandle kwayo.
Indwangu emifushane iyindlela entsha yomshado ohlanganisa omakoti abasha nabanesibindi. Izambatho ezihlukahlukene, izitayela ezehlukene, ubude obuhlukene kanye nokusikeka - umuntu onenhlanhla ngamunye uvunyelwe ukuzinikela emibonweni yakhe, bese enza isithombe somuntu ngamunye. Indlela yokukhetha ingubo emifushane yomshado, sizoxoxa kulokhu kulesi sihloko.
Umgqobo womshado wesiGreki ngemikhono kuyoba yinto enhle kunazo zonke kubantu abashadile abazimisele ukugcizelela ubuhle besilwane, ukuvumelana nomusa wezandla. Ngaphezu kwalokho, i-line topstated phezulu ibukeka igxilisa ibele, okuyinto ezoba yisisombululo esihle kakhulu samantombazane enesayizi encane. Le mhlobiso nayo ifaneleka emashadweni amancane, ngoba ukukhula okubonakalayo kukhula ngokubonga ngesiketi esikhanyayo.
Umlobokazi ngesigqoko esifushane samaGreki
Ukubukeka kwendabuko yokugqoka kwesiGreki esinesiketi eside kunesidingo nakakhulu namuhla. Okuthandwa kakhulu yi-Empire yokufakela ekufezeni okufutshane.
Kodwa-ke, uma ukhetha lo mhlobiso, kufanelekile ukunaka izici ezilandelayo:
Impahla engcono kakhulu yokuthunga izingubo ezimfushane zamaGrisi kukhona izindwangu ezincane ezigeleza - i-chiffon, isilikhi nabanye. Lokhu kuzokwenza isithombe somusa nesithintekayo. Futhi ngokukhazimula okukhulu kwengubo, izingcezu zendwangu zingafakwa emaphethweni amakhulu noma ziphonswe zibe yizikhukhula, ezigeleza ngesimo sezitimela ezihlukene njengezikhala zombali.
Inhlanganisela ephelele kuyoba ukuhlanganiswa kwezindwangu ezingasindile ezinamapayipi, ukufaka okuhlobisa noma ukugqoka.
Izambatho zomshado ezimfushane Isitayela se-Empire ngesitayela sesiGreki cishe asinayo imingcele ezinhlobonhlobo zomlobokazi. Ngakho-ke, emantombazaneni anezici ezinhle kakhulu igqoke lesiGreki lizovumela ukufihla amaphutha e-silhouette nokugxilisa ukunakwa kwe-decollete, nokho kubalulekile ukucabanga ngobude - kulokhu ingubo engeke ibe ngaphansi kwamadolo izosondela. Futhi omakoti abancanyana bangazikhukhumeza ngamapulangwe yendwangu kanye nokukhwabanisa.
Izingubo zokugqoka nemikhono
Ukuhlangana kwezinhliziyo ezimbili zothando kuyisiko elingcwele, elingenalo ukulinganiselwa eminyakeni yobudala nomshado. Ngomshado wasebusika, ungakhetha ingubo ehlanzekile ehlanjululwe ngemikhono emide ezovumela umakoti ukuba azizwe emukelekile futhi afudumele. Ochwepheshe abakhulu bayokhuluma mayelana nezici zokukhetha ingubo ngemikhono.
Ngendlela, igqoke lesiGreki lizokwenza kube lula ukufihla ibhuloho elimnandi kakhulu ngendwangu yesikwele esizobukeka isinciphise umdwebo womlobokazi bese unikeza umfanekiso ubuhle obuthinta inhliziyo.
Ezinye izitayela zokugqoka zesiGreki zomshado
Indwangu yesitayela sobukhosi iyingqayizivele, ngoba ifaneleka ngokufanayo kokubili abashadile abancane nabamantombazane besayizi. Ukugqoka ngendwangu ephakeme kakhulu kufihla ukuntuleka kwesibalo, ukubonisa ukunqunywa kwesithombe esiphezulu sesithombe. Isiketi eside eside slim, futhi i-skirt eqondile noma umzila uzokwelula isithunzi.
Ngaphezu kwalokho, igqoke lesiGreki ngokugcwele lihlanganiswe ngokuphelele ne-decollete ene-V, futhi ngenxa yethuba lokwenza i-sleeve-petal lesi singubo sizofihla amafomu amahle kakhulu emahlombe. Ingubo ingenziwa yomibili ngokuvaliwe emuva, futhi ngokuvulekile - ngokufaka izakhi ze-lacy kwendwangu ebonakalayo. Ngaphezu kwalokho, izingubo ezisezingeni leMbuso zihlangene kahle nezinhlobo ezahlukene zezesekeli nokuqedela ukuhlobisa.
Ingubo yomshado yase-Aiwory
Elegance, luxury bohemian kanye nokuyinkimbinkimbi izingubo aiwory wanqoba izinhliziyo zezigidi zomakoti emhlabeni wonke. Isihloko sethu sichaza izici eziyinhloko zokukhetha ingubo enjalo, ama-nuances okukhetha izesekeli nezinto ezibonakalayo.
Ukunethezeka okuvuthiwe: ukukhetha ingubo yomshado yomama
Isivakashi esihle: yini okufanele uyenze emshadweni wesifazane
Ukushada akubekezeleleki: ingubo yomshado wesibili
Umusa wesayizi plus: izingubo zomshado zamantombazane aphelele
Winter winter dress elula
Imibuzo eyi-10 nezimpendulo mayelana nobuhle
Umlingisi uLyubov Rudenko, biography
Ukwelashwa kobuhlungu obuphansi emuva namayeza omuntu
Izipikili eziqinile ezinemizuzu engu-15 nge-Boost Gel kusuka ku-LCN
Isipho sakho ngoKhisimusi: ingelosi yombumba we-polymer, isigaba samakhono
Izici zemfundo yamawele
Ukulungiswa kwamakhemikhali ekhaya
Izinkinga kwabesifazane emva kokuya esikhathini sokuya esikhathini
Izici zokunqoba abathandi bangaphandle